Bhose August 12, 20142014-08-12T10:49:28+00:002015-04-06T12:41:29+00:00 ओटो बीमा, Featured
साधारण अर्थमा सामान्यतया भन्दा विशेष प्रस्ताव संग एक पकड छ भनेर तय. तैपनि यो हुन सक्छ भन्ने सोचाइ समझदार छ पकड त्यहाँ छैन. तपाईं ती प्राप्त अघि यो सोचाइ तपाईं ध्यान सौदों आफ्नो होसियार रहन र जाँच गर्न अनुमति दिन्छ. हामी ठीक हाम्रो गृहकार्य गर्दैनौं किनभने कहिलेकाहीं हामी एक पासोमा चलान सक्छ, यसबारे पनि स्मार्ट प्राप्त वा जल्दी. यहाँ जाल केही तपाईं खरीद कार बीमा को सचेत हुनु आवश्यक छन्.
पहिलो भाव पछि किन्ने
यो बनाउन एक शुरुवात गल्तीलाई छ. तपाईं विषय मा एक विशेषज्ञ हो जब सम्म तपाईं कसरी आफ्नो विकल्प तुलना छैन भने तपाईं एउटा राम्रो कभरेज र मूल्य रही छ भन्ने थाहा हुनेछ? तपाईं चाँडै ढाकिएको आफ्नो नयाँ सवारीसाधान प्राप्त गर्न पनि इच्छुक छन् जब तपाईं ड्राइव गर्न सक्छन् भनेर तपाईं एक अपर्याप्त वा महँगा कवरेज मा जाल आफैलाई सक्छ.
यो एक कार खोजी गर्न केही घण्टा र ज्यादातर दिन लाग्छ. तपाईं सजिलै त्यतिन्जेल उपयुक्त नीति जाँच गर्न सक्छन्. तपाईं यसको लागि एक बोली प्राप्त गर्न अघि तपाईं आफ्नै गाडी छैन. उनीहरूले चाँडै तपाईं संग आजित पाउनुहुनेछ एक बोली प्राप्त गर्न विभिन्न कार विवरण संग एक दलाल दैनिक कल भने. तथापि, अनलाइन बोली प्लेटफर्म तपाईं कुनै पनि वाहन को लागि उद्धरण प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ. तपाईं काम गर्दै छन् किनकी तपाईं रूपमा धेरै चाहनुहुन्छ रूपमा यी उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
अपर्याप्त कभरेज खरीद
Motorists बनाउन सबै भन्दा साधारण गल्ती एक तिनीहरूले न्यूनतम राज्य आवश्यक देनदारियों कवर को लागि जाने भने नीतिहरु धेरै सस्ता हुनेछ भनेर सोच्नु छ. तपाईं ध्यान दोकान को आसपास जब एक आधारभूत कवरेज र एक व्यापक एक बीच प्रीमियम फरक विशेष गरी केही अवस्थाहरूमा सय डलर मात्र दम्पतीले हुन सक्छ.
मूल आवरण निरपेक्ष न्यूनतम छ र तपाईं पर्याप्त देनदारियों सट्टा कवर किन्न सल्लाह दिएको छ. यसबाहेक, यी नीतिहरु आफ्नो घाटा लागि कुनै कवरेज प्रदान. गाडिहरु भन्दा मान्छे को लागि ठूलो लगानी हो. खर्च $5,000 एउटा पुरानो प्रयुक्त स्वत तपाईं को लागि एक भाग्य जस्तै प्रतीत हुन्छ लागि धेरै पैसा छैन जब. तपाईं राम्रो कमाई र पैसा जब तपाईं एक ड्राइभिङ्ग हुनेछ $50,000 कार जसरी. दुवै अवस्थामा यो बीमा एक ठूलो लगानी हुनेछ.
आम, प्रीमियमहरुको प्राप्त उच्च को deductibles तल्लो. त्यसैले, एक विशेष कार बीमा उद्धरण तिनीहरूलाई बाँकी भन्दा धेरै सस्ता छ भने तपाईं deductibles जाँच गर्नुपर्छ. यो तपाईं आफ्नो बीमा कम्पनी क्षतिको बाँकी तिर्न अघि आफ्नो खल्ती बाहिर तिर्न छ पैसा छ. तपाईं यो पनि उच्च सेट भने तपाईं भन्दा बिगार्छ आफैलाई अन्त दे सक्छ. अनि तपाईंले एक वर्ष मा एक भन्दा बढी दुर्भाग्यपूर्ण घटना छ भने यो गाह्रो यो सामना गर्न पाउनेछैनौ.
एक मानक नीति तपाईं संग एकै परिवारका साथै कुनै पनि कहिलेकाहीं ड्राइभर बस्ने सबैलाई कवर गर्नुपर्छ. तपाईं एक सस्ते ओटो बीमा उद्धरण स्वीकार गर्दा तपाईं आफ्नो कार ड्राइव गर्न अनुमति दिएको छ, जो जाँच सक्छ. के तपाईं वास्तवमा पलिसी गर्न चालक वा मात्र पैसा बचत गर्न सूचीबद्ध चालक सीमित गर्न चाहनु सक्छ बीमा वाहन ड्राइव अरु कसैलाई अनुमति गइरहेका छैनन् भने. यो आफ्नो कार ड्राइव गर्न बीमा छैन जो छ र जो थाह र तदनुसार यो व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण छ.
विशेष परिस्थितिहरु र Exclusions
नीति wordings मा विशेष अवस्था लागि बाहिर हेर्नुहोस्. उदाहरणका लागि, केहि नीतिहरु यो हर्जाना निम्न एक बीमा स्वत मर्मत गर्न बीमा कम्पनी aftermarket भागहरु प्रयोग गर्न अनुमति दिन सक्छ. तपाईं एउटा पुरानो गाडी भने यो एक ठूलो विवाद हुन सक्छ र तपाईं किनभने यो अवस्था राम्रो छूट पाइरहेका छन्. के तपाईं एक एकदम नयाँ र महँगा सवारीसाधान आफु तर जब तपाईं त्यस्तो अवस्थामा चाहँदैनन्.
कुनै शिष्टता कार
सस्तो नीति अर्को विशिष्ट विशेषता तपाइँको गैरेज मर्मत भइरहेको छ जब तिनीहरूले एक शिष्टाचार कार प्रस्ताव नगर्न सक्छ भन्ने छ. फेरि, यो तपाईंको लागि एक ठूलो विवाद हुन सक्छ र आफ्नो कार कहिल्यै क्षतिग्रस्त हुन्छ भने तपाईं वास्तवमा छूट प्राप्त अब सट्टा एक शिष्टाचार कार रही रुचि हुन सक्छ. बस भनेर धेरै मानिसहरू आफ्नो नीति मा कुनै यस्तो व्यवस्था हुँदा एक शिष्टाचार कार दिएको छैन कि घटना पछि गुनासो.
Assuming सबै नीतिले समान हुनुहुन्छ
एक एकल स्वत बीमा कम्पनी समान हुनेछ बजार मा बेच सबै नीति अड्कल काट्ने नीतिहरु कि को धेरै अलग अलग स्तर भेटी हुन सक्छ एक बिट अनभिज्ञ छ. हरेक नीति प्रत्येक अन्य देखि मामूली वा ठूलो बदलाव छ. सामान्यतया यो मूल्य झल्किन्छ. अनुसार cheapautoinsurance.net, "तपाईं सन्तोषजनक नीति भन्दा कम प्राप्त र तपाईं दोकान को आसपास सकेनौं भने अझै पनि कहिलेकाहीं पूर्ण प्रिमियम तिर्न सक्छ".
Assuming दर बजार भर समान हो
फेरि, हरेक कम्पनी पाउँछ रूप व्यक्तिगत किनभने यो एक विसंगत आशा छ. तिनीहरूले स्वामित्व जोखिम र प्रिमियम गणना र आफ्नो व्यवसाय चलान बेग्लै तरिकामा छ. एक कम्पनी धेरै लोकप्रिय छ जब तिनीहरूले स्वाभाविक जोखिम को मामला मा गुच्छा को सबै भन्दा राम्रो टिप्न सक्षम हुनेछ. तिनीहरूले जोखिम को एक मामूली चिन्ह देख्दा तिनीहरूले चाँडै आफ्नो मूल्यहरु. तथापि, एक कम लोकप्रिय कम्पनी तिनीहरूले व्यापार जित्न गर्न सुनिश्चित गर्न चेक आफ्नो मूल्य राख्न हुनेछ.
मासिक किश्तहरुको द्वारा दिंदा
निस्सन्देह, यो पक्कै पनि विषयमा त्यहाँ छ मासिक installments द्वारा तिर्न सजिलो छ. तथापि, बीमा प्रीमियम स्थापना को समय मा भुक्तान कारण हो. एक कम्पनी तपाईं भुक्तान फैलाउन अनुमति छ भने तिनीहरूले तपाईं क्रेडिट दे रहे. सामान्यतया यो एक लागत मा आउछ. तिनीहरूले सामान्यतया अग्रिम र पूर्ण तिर्न मानिसहरूलाई चासो साथै भेटी विशेष छूट शुल्क. तपाईं भुक्तान फैलाउन भने तपाईं र अधिक भुगतान अन्त हुनेछ.
एक महँगा खरीद अटोमोबाइल बीमा
थुप्रै motorists कार किनेको र यो आफ्नो नयाँ सवारी बीमा पनि महंगा छ कि पछि बुझे. तपाईं खेल कार विचार गर्दै छन् जब, एसयूवी, 4x4s र असामान्य व्यक्तिहरूलाई तपाईं तिनीहरूलाई बीमा महंगा हुन सक्छ भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ. Premium मतभेद कार एक र कार बी को छनौट बीच धेरै तीन रूपमा गुणा बढी हुन सक्छ.
तपाईं किफायती मोटर बीमा प्राप्त गर्न धेरै रहस्य जान्न आवश्यक छैन. तर, तपाईंलाई थाहा छ र केही चाल सचेत हुनु आवश्यक छ. त्यसपछि, तपाईं नवीकरण पछि पैसा नवीकरण बचत राख्न सक्छ. यी आधारभूत सिद्धान्तहरू पालन गर्न असफल तपाईं पैसा खर्च गर्न सक्छ.
एक साइबर बीमा दायित्व तपाईंको इन्टरनेट व्यापार रक्षा
शीर्ष 10 आगो बीमा नीतिहरू जब खरीद गल्ती तपाईं जोगिन पर्छ